Corporate office: Kupandol Lalitpur
Call us 00977-1-5180182
Financial Report (QUARTERLY REPORT)
Sudur Paschim Pradesh
NCBL Saving Product
१. साधारण बचत
(क) साधारण बचत खाता शून्य मौज्दातमा खोल्न सकिन्छ । यस बचत खातामा जति पनि रकम राख्न झिक्न सकिन्छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ । यो बचत खाता सानो कारोवार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको लागि उपयोगी छ ।
(ख) न्युनतम रु.१०००/- मौज्दात राखी खाता संचालन गर्न सकिन्छ । यस खाताको रकम जुन सुकै बेलामा झिक्न जम्मा गर्न सकिन्छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ । सानो कारोवार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरुको लागि उपयोगी छ ।
२. विशेष बचत :
विशेष बचत खाता न्यूनतम रु.१०,०००/- मा खोल्न सकिन्छ । यस खाताको रकम जुन सुकै बेलामा झिक्न र जम्मा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको खातामा दैनिक व्याज गणना गरीन्छ । त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
३. सुपर बचत :
सुपर बचत खाता न्यूनतम रु.२५,०००/- मा संचालन गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको खाता सहकारी संघ/संस्थाको तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुन्छ । यस खातामा रहेको रकमको मौज्दात अनुसार कम मौज्दातमा कम व्याजदर र बढी मौज्दातमा बढी व्याजदरको व्यवस्था रहेको छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ । यो खातामा रु.२५,०००/- देखि रु.१० लाख सम्मको मौज्दातमा एउटा व्याजदर निर्धारण गरिएको छ भने रु. १० लाख एक रुपैया देखि रु.२५ लाख सम्मको मौज्दातमा अर्को व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी रु.२५ लाख एक रुपैया देखि माथिको मौज्दातमा छुट्टै व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यस खातामा जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
४. एन.सि वि एल प्रीमियम बचत खाता :
एन.सि. वि. एल. प्रीमियम बचत खाता न्यूनतम रु.१,००,०००/- मौज्दात वाट संचालन गर्न सकिन्छ । यो बचत खाता ठूलो कारोवार गर्ने सहकारी संघ/संस्थालाई उपयोगी छ । यस खातामा जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
५. अनिवार्य नियमित बचत :
यस बचत खाताको समय आवधि ५ वर्षको छ । सम्झौता अनुसारको रकम नियमित रुपमा हरेक महिना जम्मा गर्नु पर्छ । यस बचत खातमा मासिक रुपमा रु.१,०००/-, रु.५,०००/-, रु.१०,०००/-, रु.५०,०००/-, रु.१,००,०००/-, रु.२,००,०००/- र सो भन्दा माथिको दरले रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । मौज्दात अनुसार व्याजदर फरक हुनेछ तर २ लाख भन्दा माथी जति सुकै रकमको दरले रकम जम्मा गरे पनि व्याजदर रु.२ लाखको व्याजदर सँग समान हुन्छ । यस बचत खातामा चेक जारी गरिने छैन । बचतको समय अवधि समाप्त नभएसम्म रकम झिक्न् सकिने छैन । अवधि समाप्त भए पश्चात साँवा र ब्याज एकमुष्ट भुक्तनी लिन सकिन्छ । यस बचत खातामा जम्मा भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिन्छ । कर्जाको म्याद निक्षेपको समय अवधि भन्दा अगावै समाप्त हुने गरी कायम गरिएको हुन्छ । यस निक्षेपमा दिईने कर्जाको व्याजदर सम्वन्धित बचतको व्याज दरमा २ प्रतिशत थप गरी कायम गरिएको हुन्छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
६. क्रमिक बचत :
यो बचत खाता छ महिने र १ वर्षे अवधीको मात्र रहेको छ । यस खातामा जति पनि रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यस बचत खातामा चेक जारी गरिने छैन । बचतको समय अवधि समाप्त नभएसम्म रकम झिक्न् सकिने छैन । अवधि समाप्त भए पश्चात साँवा र ब्याज एकमुष्ट भुक्तनी लिन सकिन्छ । यस बचत खातामा जम्मा भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिन्छ । कर्जाको म्याद निक्षेपको समय अवधि भन्दा अगावै समाप्त हुने गरी कायम गरिने छ । यस निक्षेपमा दिईने कर्जाकोे व्याजदर सम्वन्धित बचतको व्याज दरमा २ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
७. मुद्धती निक्षेप :
मुद्धती निक्षेप बचत खाता ३ महिने, ६ महिने,९ महिने र १ वर्षको रहेको छ । यो मुद्धती खाता रु.१,००,०००/- देखि जति पनि रकममा संचालन गर्न सकिन्छ । यस मुद्धती समय अवधि आधारमा व्याजदर फरक रहने छ । यस बचत खातमा जम्मा भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिन्छ । कर्जाको म्याद निक्षेपको समय अवधि भन्दा अगावै समाप्त हुने गरी कायम गरिने छ । यस निक्षेपमा दिईने कर्जाको व्याजदर सम्वन्धित बचतको व्याज दरमा २ प्रतिशत थप हुनेछ । यस खातामा दैनिक मैज्दातमा व्याज गणना गरिन्छ भने त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
नोटः संबै किसिमको बचत खाताको संचालनका लागि संस्थाको निर्णयबाट तोकिए कम्तीमा दुई जना संस्थाका पदाधिकारीको संयूक्त दस्तखत अनिवार्य हुनेछ ।
1) NCHL Interbank Payment System
3) SMS Banking
(For details visit your nearest branch)
National Cooperative Federation of Nepal (NCF/N)
Network for the Development of Agricultural Cooperative for Asia and the Pacific (NEDAC)
Center for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)
NCBL Calendar 2078
Kupandol, Lalitpur Nepal
Toll Free: 16600102999
© NCBL - All right reserved.